Vavahady Serasera.org | Fitsipi-pifehezana
Fandraisana Fanontaniana Fitsipika Hisoratra anarana Hiditra
Ny serasera.org dia takelaka malagasy iray tsy miankina niforona tamin'ny 3 oktobra 1999 ary natao indrindra mba hifandraisan'ny samy Malagasy.
Tsara raha vakianao aloha ireto fitsipika ireto alohan'ny hidiranao ho mpikambana ato amin'ny serasera.org
Ny mpitantana ny namana ato amin'ny namana.serasera.org dia manana ny zo:
- Hanova ny votoatiny manontolo na ampahan'ity fitsipika ity.
- Hanova ny votoatiny manontolo na ampahan'ny takelaka.
1. Momba ny fidirana ho namana
Ny fidirana ho mpikambana ato amin'ny namana.serasera.org dia maimaim-poana. Ny ilaina dia ny fanananao adiresy imailaka mazava tsara sy mandeha tsara.
Ny namana misoratra anarana dia manaiky fa hanaraka ny voalaza ato amin'ity fitsipika ity. Manaiky ihany koa fa ny mombamomba azy izay asehony na tsia dia marina sy azo itokisana. Tsy iantohan'ny mpitantana anefa ny maha marina na tsia ny mombamomba ny namana iray.
Ny mpikambana rehetra dia manana solonanarana (login) izay ampiasainy mandritra ny fitsidihana ny takelaka.
Azon'ny mpandrindra esorina avy hatrany ireo Solonanarana izay tsy manaja ny mahaolona na manohitohina ny firindran'ny takelaka na mamoafady na koa tsy mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery.
Ny namana ihany no mahalala ny tenimiafina izay ampiasainy.
Ny namana no tomponandraikitra voalohany amin'ny fitehirizana ny Tenimiafina izay nofidiny. Tsy tompon'andraikitra amin'izay mety ho fiparitahan'ny tenimiafina ny eto amin'ny takelaka raha toa ka tsy hain'ny namana ny nitahiry izany.
Azon'ny namana atao ny manova ny tenimiafina araka izay tiany miaraka amin'ny mombamomba azy.
Azon'ny namana atao ny mameno na tsia ny momba azy araka izay tiany rehefa mifanaraka amin'ity fitsipika ity.
Ny namana izay tsy mamangy ny takelaka mandritra ny 120 andro (efa-bolana) dia voafafa ho azy ao anaty lisitra. Tsy tompon'andraikitra amin'izay tahiry rehetra very amin'izany ny mpandrindra. Azony atao indray anefa ny misoratra anarana aorian'izay.
2. Momba ny fitondrantena
Ny namana.serasera.org dia tsy tomponandraikitra amin'ny mety ho toetra na fomban'ny namana tsirairay ao anatiny. Ankinina tanteraka amin'ny fahendren'ny namana ny momba izany.
Azon'ny tsirairay atao kosa anefa ny mandefa fitarainana momba ny toetra ratsy ataon'ny namana iray. Raha voamarina izany dia esorina tsy ho namana intsony izay ninia nanao hadisoana.
Ny fitarainana mety hanesorana namana ao anatin'ny lisitra, raha voamarina, dia ny fanopana na fanozonana ny namana hafa, ny fandefasana sary na teny maloto amin'ny namana, ny fametrahana teny maloto na sary maloto ao amin'ny mombamomba ny namana, ny fanosoram-potaka amin'ny alalan'ny solonanarana, ny fisandohana ny anaran'olo-malaza (artista, mpanao politika, mpitondra fiangonana) amin'ny alalan'ny solonanarana sy ny mombamomba.
Ny namana mametraka sary na teny mamoafady manafintohina ny namana hafa dia esorina tsy ho namana intsony ary tsy afaka miverina ho namana vaovao intsony.
Ny fitarainana rehetra momba ny takelaka dia azonao alefa amin'ny admin@serasera.org.
Ny fahendrena malagasy no entina mifampitondra ato amin'ny namana ka matoky ny fahendren'ny namana tsirairay avy.
3. Teny avy amin'ny mpandrindra
Ny mpandrindra ny serasera.org dia manome toky fa hanaja ny namana tsirairay ao aminy sy ny mombamomba azy.
Ny mpandrindra ny serasera.org dia tsy hizara na hanome olona hafa ny adiresy imailaka na koa ny mombamomba ny olona iray.
Ny serasera.org dia hiezaka hatrany hanatsara ny takelaka. Raha sanatria anefa misy ny tsy fahatomombanan'ny takelaka dia tsy voafatotra amin'izay mety ho fahaverezan'ny tahiry rehetra ny mpandrindra.
Ity fitsipika fohy ity dia azon'ny mpandrindra ovaina na ampiana araka izay mahamety azy.
Natao teto Antananarivo ny vendredi 14 mars 2003 09:58:45
Nahitsy ny 08/02/2004 15:08
Nahitsy teto Roma ny 09/09/2005
Concept and Design © Serasera.org: Eugene Hery Tel +39 338 744 2412 (Italie)